November 19, 2020 Xuseen 14
Puntlandtimes (Laascaanood)-Madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargaysa kaga qeyb-galay aas ballaadhan oo loo sameeyey Marxuum Cumar Carte Qaalib oo lagu Aasay Xabaalaha Baqiic ee Caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay wehelinayaan masuuliyiin tiro badan ayaa aaska ka raacay guriga Marxuumka waxaana, markii uu aasku soo dhammaaday uu ku dheeraad waxyaabihii uu marxuumku u soo qabtay maamulka Somaliland, kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed.
“Waxaynu joognaa maanta Geerida iyo Aaska Alle ha naxariisto Cumar Carte Qaalib qof walba oo Af-soomaali ku hadlaa wuu garanayaa Dawladdo badan iyo aqoonyahan badan oo Caalamka kamida, dad badan oo uu wax baray ayaa dalkan wax badan taray oo magac ku yeeshay , February 1960kii markii doorashada la helay ee la geli doono shirkii isku darka wuxuu ahaa Aqoonyahankii ku taliyey waar dib halloo dhigo raacsanaa ee labada Xisbi u kala dab qaaday, markii uu shaqeeyey ee uu Magaalada Hargeysa ka ahaa Dhiisayga (Badhasaab) wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee Dibjir guryo loo sameeyo ee sekeda la yirhaahdo Dibjir Band sameeyey, Markii uu Moosko loo magacaabay ee uu Xoghayaha ka ahaa Safaaraddii uu Qeybe ka ahaa Safiirka wuxuu ahaa dadkii diyaariyey Daraafkii uu Cabdirashiid doonayey in ciidamada ay nasiiyaan, kolkii danbena uu safiirkii Addis ababa inta badan ku raagay”.
“Cumar Carte Taariikh la yaab leh buu sameeyey oo siyaasada ah, wuxuu Taariikhda ku gelayaa Cumar Carte markii Siyaad Barre ka leexday majarihii Dawladd ee Soomaali wax u tarayey wuxuu hormuud ka ahaa isaga iyo Ismaaciil Cali Abokor raggii yiri waar joog waad qaldan tahay ee dalka tan ka daa,” sidaasi waxaa yiri Muuse Biixi.
Inti dhimatay alaha u naxariisto nin walba malinbaa lagasoo dareeraya. Qof walbana wuxu shaqays tuu leyaha xun iyo sanba.
Muuse Teneg muxuu aaska ka dooney isagoo saqraansan.
Waxaa goobtii aaska laga soo weriyey in wiilka Cumar Carte Qaalin uu aad uga xumaadey in Muuse Biixi yimaado aaska aabahiis isagoo saqraansan oo kharmiga ka soo uraayo oo uu dad badan ku aflagaadeeyo dusha qabriga aabahiis.
Midhkaa aad tidhi wiilka Cumar Carte kama raali aheyn inuu Muuse aaska aabihii yimaado waad ku saxsan tahay oo dad badanoo reerkiisaa baa ka cadhooney anigu aan ku jiro.
Tan ku saabsan inuu mujaahid Muuse soo yara daray dee waa caadi boowe wax lala yaabo maahan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Waxaa lagu jiraa 21 century yaa badow kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Aduunyo ayaan biiximarkuu dhinto oo tiisu timaado gafka uu gaysto buu helin
Madaxweyne Biixi kama hadal hadal wax shakhsiyada Marxuum S.Bàrre taabanaya,wuxuse soo hadal qaaday hal ama laba ficiladiisii kamida,ahna xaqiiqo…
Mawti Laguma tiigaalo,waxanse been ahayn qof walbaa wuxu ka dhex ahaa umadiisu way taqaan,Ilaahayna camalkiisa ayuu la hor tegi….
Yaa u sabab ahaa burburka dawladnimadii Soomaaliyeed?
Yaa u sabab ahaa in kalsoonidii umadu lunto,utuna sii kala dhex dhigay,cadowna isaga dhigay?
Waxay uun kusoo biyo shuban maahmaahda soomaaliyeed ee ah
“AYAX TEG EELNA REEB.
@Cm meelaha qaar waan kugu raacsanahay ee ay ka mid tahay in aanu caayin un kaliya sheegay Cumar AU inuu talo siiyay,xoogaa qabyaalad ahna wey ku jirtayoo maanu sheegin Somalidii kalee Cumar lala xiray 2dii Isaaq unbuu sheegay.Gen Cumar Xaaji Dr M Adan Sheekh Jeelle iyi rag kaloo badan baa qabay in AU MSBARE ay ahayd 1982 inuu tago.
Waxaan kugu diidabahay in MSBARE 100% eedda lahaa waxaan sal uga dhigayaa.
Raggii xukunka la tuuray maanay ahayn dhalinyaro ee waxay ahaayeen Generallo,wasiiro ambassadors MP isaga ku da ama generation ahaa.MAXAY DALKA U BADBAADIN WAAYEEN?Ma waxaad leedahay eedaysanaha ayay ahayd inuu dalka bad baadiyo?
Si fiican u dhagayso waraysiga Professor Jawaari wax badan oo naga qarsoonaa ayaa kuusoo baxaaya.
Halka uu leeyahay waxaa lagu heshiiyay in MSBARE aan sahay siiyo si nabad ah ku baxo,waxaa loo xilsaaray Jawaari iyi Gen Gaani.
Habhaduhu ay joogaan meeshooda,la dib la isu yimaado halkaa kala qabso wixii dhacay.
LAMA QARIN KARO MSBARE WIXII KA QALDAMAY IYO WUXUU SAXAY.
Waxaanse difaacnaa kuwo wax burburiyay aan waxba qaban CADAALADDA SOMALIDA AYAA SIDAA AH
Maxamed Siyaad Barre rag badan oo si wadajir ah talo ugu soo jeediyey ayuu isagoo aan qabiil u eegin xabsiga dhigay, waxayna ahaayeen:
1. Gen. Cumar Xaaji Masalle (Mareexaan)
2. Dr Maxamed Aadan sheekh (Mareexaan)
3. Maxamed Yuusuf Weyrax ( Majeerteen)
4. Warsame Faarax Cali (Joqof) –Majeerteen
5. Gen Ismaaciil Cali Abokor (Isaaq).
6. Cumar Carte Qaalib (Isaaq)
7. Cismaan Maxamed Jeelle (Xawaadle)
Mar dambe waxaa dil lagu xukumay Cumar Carte iyo, haddii aanan khaldanayn, Ismaaciil Cali Abokor. Ma filayo in Maxamed Siyaad dhab ka ahaa xukunkaasi; waxaan filayaa inuu uga gollahaa gorgortan iyo inuu cadaadis ku saaro beesha Isaaq maadaama uu socday dagaalkii Waqooyi ee SNM.
Arrinka Barre ka sheegay Muuse Biixi ee adna aad ku raacday, haddii uu been yahayna waad qadafteen ninkaas oo dambi weyn baad xambaarateen, haddii uu run yahayna waa anfariir iyo amakaag — may Almighty Allaah save people of Somaliland.
Kala duwanaanshaha fikirku waa jiraa,laakiin xaqiiqadu labo maaha,maba aqbasho feker qof ama ashkhaas Ku kooban,kana duwan xaqiiqo la wada ogyahay…..
Hadalka Waraysiga Jawaari Ku jira,uuna leeyahay S.Barre talada inuu wareejiyo ayuu rabay waan arkay,waase goorma ayaase su’aashu tahay??
Soon màaha mar xeedho iyo fandhaal kala dhaceen,jabhadihiina dalkii la wareegeen?
Intaan talk faro ka bixin waatuu diiday inuu xilka wareejiyo ama wada-xaajood la furo Jabhadaha si dalka loo bad-baadiyo,waana xidhxidhay hal-doorkii umadda ee talada siiyay,wuxuna Ku madax adaygay wixii u muuqday oo ahaa kursiga ilaa barako ma leh arintu gaadhay,waana marka aad ka hadlayso oo ahaa aakhirkii 1989-kii,jabhaduhuna dalkii kala wareegeen,go’aamadiisuna soconayn,ayna keliya u hadhsanayd inuu naftiisa la firxado.
Midda ah cidda masuuliyada dhibkii dhacay qaadaysa Hadaad ka duwayso ninkii talada hayay,ayna kasoo fulayeen awaamiirtà wixii dhacayay yaad dusha u saari?
Ninka umada taladeeda hayay ayaa qaaday masuuliyada iyo qaraabadiisa la taliyaasha u ahaa ,siinayayna talooyinka khaldan,kabihiisana gashanayay markay doonàan,waxay doonaana Ku samaynayay.
Dhulgub Afweyne haddii uu qof wanaagsan ahaan lahaa kuma uusan bakhttiyeen Nigeria. Waxaa uu laayey Saraakiil, Culimo, Ardey. Waxaa uu Shacbiga uu ku khasbey Shuuci nimo iyo in loo heeso Karal Marxis iyo Linen oo ahaa gaala cadeystay. Waloo markii dambe ay afka haraati kaga dhufteyn. Mudug, Nugaal, Waqooyi Galbbeed , Togdheer iyo Jubadda Hoose meel kasta cagta uu uu marshey. Waxaa uu ahaa fuley jaahil oo naxariis laawe ah.
Arinta aad ka hadlaysaan hadayba taagan tahay,talona u baahantahay marka HANUUNIYE (GUUL-WADE) maanta dadku si fudud uma gaardinayaan,aabowna qaadi maayaan,mana aha kuwii shalay oo kale ee Ku dadaal inaad talk wanaagsan siisaan FARMAAJO,si aanu u Marin wadadii Afweyne.
Taladii seegtay Afweyne yaanay Farmaajona seegin,taariikh xumo iyo raad xumona u dambayn ee intaad ookiyaalaha guul-wadaynta iyo kharashka iska ilowdaan taariikhda Afweyne tagtayee ta maanta qormaysa saxa…..
Hadalkaygii hore waxaan qoray anigoo aan daawan videoga janaasada. Mar dambe ayaan videoga daawaday. Runtii, waxaa wax laga xumaado ah in Madaxweyne Muuse Biixi — kasokoow siyaasad badan oo uu ka hadlay, wuxuu lacnaday Soomaalida ‘Koonfurta’ [Italian Somaliland] iyo aabbahoodba. Muuse Biixi xor buu u yahay inuu wuxuu doono ku hadlo laakiin waxaa nasiidarro ahayd inuu meydka iyo qabriga korkiisa malaayiin muslimiin ah iyo aabbayaashood mowti ah ku lacnado. Waxaa habboonayd in la ixtiraamo janaasada, loona duceeyo marxuumka, laguna cibroqaato in qof kasta godkaas ku dambeyn doono.
A.Arar sxb maxaa ka fileysey idoor wagaashle saqraansan oo caroodey kkkkkkkkk. Dadkaan caadi maaha marka yaan dhaqankooda xun lagu wareerin maxaa yeeley waxda soomaalida agtooda ceeb iyo xaaraan ka ah yaa kuwaan caado u ah. Horuu sayidkii yiri idoor wagaash iyo kufriga wacad allow yaalle.
Markii xaqiiqda laga hadlo AUN siyad Barre masuul kama aheen burburkii soomaliya lakiin qeyb buu ka ahaa. 50% SOOMALIYA waxaa burburiyey siyad Barre in kastoo wax badan qabtey 50% waxaa ka mas’uul ah jabhadihii qabiilka ku dhisnaa wax figrad ah meynan wadan markey wadanka la wareegen maxeey maamul mideysan u dhisi waayeen waa haday qeyr la haayeen.